Kooxo Hubeysan oo weerar ku qaaday Goob ay ku sugnaayen Ciidamo ka tirsan Puntland – STAR FM SOMALIA
Kooxo Hubeysan oo weerar ku qaaday Goob ay ku sugnaayen Ciidamo ka tirsan Puntland
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso, ayaa sheegaya in Kooxo hubeysan ay Habeenimadii xalay weerar culus ku qaaday Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo hal meel kuwada sugnaa.
Weerarka ayaa dhacay abaara sideeddii fiidmimo, waxaana lasoo sheegayaa in Ciidamada la weeraray ay ilaalo u ahaayeen Ibrahim Maxamed Jige oo ahaa Gudoomiyihii hore ee laanta Canshuuraha Beriga gobolka Bari.
Weerarka oo muddo kooban socday ayaa waxa uu ka dhacay sida dadka deegaanka ay kusoo waramayaan Isgoyska Afar irdoodka ee Laamiga dheer ee dhex mara magaalada Boosaaso.
Weerarka oo labada dhinac ay isku weydaarsadeen Hubka kala duwan ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah ilaalada Gudoomiyihii hore ee laanta Canshuuraha Beriga gobolka Bari, Ibrahim Maxamed Jige.
Sidoo kale, weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay Askari kale oo la socday Guddoomiyaha iyo qof kale oo rayid ah.
Waxaa socda baaritaano lagu baadigoobayo Kooxahaasi, walow ay xili hore gaaren halkii ay doonayeen inay gaaran.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas sida ay baahisay idaacadda Andalus ee afka al-shabab ku hadasha.
Al-Shabaab oo 3 ruux ku dishay goob dhuxusha laga jaro oo ku taal Jubada Hoose
Shirkii dib u heshiisiinta ee ka socday magaalada kismaayo oo la soo gaba gabeeyey